किन हामीलाई छनौट गर्नुहोस्?
कपडा कच्चा मालको मूल्य सबै तरिका मा वृद्धि भएको छ, बढ्दो सम्पूर्ण चेन अन्तर्गत बजार के?
गत वर्षको दोस्रो आधा देखि, क्षमता घटाउने र कडा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कारकबाट प्रभावित, कच्चा मालको मूल्य बढेको छ। चिनियाँ नयाँ वर्ष पछि, "मूल्य वृद्धि" फेरि बढ्यो, अपस्ट्रीमबाट %०% भन्दा बढीको बृद्धि संग ...
मानिसहरू ग्रीष्म Tतुमा धेरै टाढा छन्?
व्यक्तिहरूले जिम टी लगाएकोमा रमाइलो गर्दछन्, फेब्रिक शर्टको शैली हो जुन यसको शरीर र आस्तीनको टी आकारको पछि नाम दिइएको छ। परम्परागत रूपमा, यसमा छोटो आस्तीन र गोलाकार नेकलाइन छ, जसलाई चालक दलको घाँटी भनेर चिनिन्छ, जसमा कलर छैन। टी-शर्टहरू सामान्यतया स्ट्रेची, हल्का र सस्तो कपडाबाट बनाइन्छ र सजिलो टी ...
बच्चाहरु र स्टाइलिश बिना हुडीहरू कसरी मिलाउने?
यो भनिन्छ कि स्वेटरमा "तीन बेवास्ता" छ जुनसुकै उमेरको भए पनि पुरुष र महिला, युवा र बुढो जस्तोसुकै शैलीको मतलब यो छ, स्वेटरहरूले सबैको दैनिक पोशाक सन्तुष्ट गर्न सक्छ, तपाईं यसलाई सरल र कम-की राख्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं यसलाई फेसनदार र फेसन बनाउन सक्नुहुन्छ; वा रेट्रो, एआर ...
प्रचण्ड र स्वेटशर्ट्स फेसनको सुविधाहरू २०२०-२०१२ का लागि！
हामी हरेक दिनको लागि स्वेटशर्ट लगाउँछौं। स्वेर्टशर्ट लगाउनका लागि नयाँ विचारहरू ... अक्सर महिलाहरू व्यावहारिक र बहुमुखी प्रकारका कपडाहरूबाट आकर्षित हुन्छन् जुन दिइएको मौसममा अन्य धेरै चीजहरूसँग मिल्न सकिन्छ। यस कोटीले महिलाको स्वेटशर्ट र हूडी सामिल गर्दछ, जसको फोटो फाउन् ...
यो तपाइँको शरीर गरम! जर्मनीले कालो विज्ञान र प्रविधि हुडी बनायो जसले २०० अमेरिकी डलरको कश्मीरी कपडाको सट्टा गर्न सक्छ!
शरद earlyतु र शरद lateतुको शुरुमा, मानिसहरू ऊनको साथ स्वेटरको सट्टा एकल अप-पोशाक लगाउन बहुमुखी हुन्छ, जुन गह्रौं वा भारी हुँदैन, तर न्यानोपन र सजिलो बनाउन सक्छ। यो धुने पछि कुनै ढीला र पिलिंग कपाल छ, तपाईं आफ्नै खेलमा लगाउन सक्नुहुन्छ र अधिक सोच बिना बाहिर जान सक्नुहुन्छ। ...
२०२१ स्वीटशर्ट र हुडिहरूको ट्रेन्डहरू यहाँ छन्？
मानिसहरू हडिज र स्वेर्टशर्ट लगाएर रमाउँछन्। केहिलाई सुपर छोटोको साथ ठूलो महसुस हुन्छ, केहि आरामदायी xxxl र लामो शैलीहरू मन पराउँछन् र तिनीहरू बजारमा धेरै लोकप्रिय छन्। हाम्रो वार्डरोबमा केही हूडीहरू पर्दा हाम्रो ड्रेसिंग शैली र दृष्टिकोणमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। अब, DUFIEST प्रकट गर्न गइरहेको छ ...
कपडा उद्योग धेरै परिवर्तन हुँदैछ। के तपाई यस बारे सचेत हुनुहुन्छ?
निस्सन्देह, गत १० बर्षमा गार्मेन्ट उद्योगका लागि आईटी सबैभन्दा गाह्रो १० बर्ष हो, पहिलो मौलिक परम्परागत खुद्रा बिजुली व्यवसाय छाला जीवन, हालका वर्षहरूमा, केवल थोरै मात्र कपडा उद्योग कम्पनीहरूको बिक्री वृद्धिमा छरिएका छ, कम्पनीहरूको% ०% गिरावट मा हो, बु ...
सरल र निजीकृत ग्राफिक - पुरुष बान्की प्रवृत्ति
प्रेरणा पत्रहरू पैटर्नका सब भन्दा भिन्न प्रकारहरू हुन्, एक छोटो वाक्य, एक ब्रान्ड लोगो, ग्राफिक्स र पाठको संयोजन; यी अनुबंधित व्यक्तिगत चरित्रको डिजाईनको प्राय सीधा अभिव्यक्ति हुन्छ, डिजाईन राइजमा लागू हुन्छ "कलमले आँखा खेलाउने सूचक" इफेइ ...
भविष्य ईंट र मोर्टारको कपडा पसलहरूको? यी चार प्रवृत्तिले, तपाईंको कपडा स्टोरको भाग्य बदल्नेछ!
२०-१२-२०१ admin मा प्रशासक द्वारा
फुटकर विक्रेताको लागि परम मोडेल के हो? औद्योगिक क्रान्ति पछि राजस्व मोडेल र रिटेलरहरूको नाफा मोडेल परिवर्तन भएको छैन। यदि भौतिक स्टोरहरू बाँच्न छन भने, तिनीहरूलाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्नेछ र भौतिक स्टोरहरूको अन्तिम उद्देश्य फरक हुनेछ। १ physical शारीरिक r को उद्देश्य ...
यो हुडी अनारको बोक्राबाट बनेको हुन्छ र पूर्ण रूपमा बायोडिग्रेडहरू？
चाँडो फेशन विन्डिल प्यान्ट, क्रप टप्स, वा ती साना 's ० दशकको धूपको चश्मा जस्ता ट्रेंडहरू जाँच्न उत्तम तरिका हो। तर पछिल्लो फेडहरू भन्दा फरक, ती कपडाहरू र सामानहरू विघटन हुन दशकौं वा शताब्दीहरू लाग्छ। अभिनव पुरुषहरुको कपडा ब्रान्ड भोलेबक एक हुडीको साथ बाहिर आएको छ जुन पूर्ण रूपमा कम्पोज हो ...
रिसाइकल गरिएको पॉलिएस्टर कत्तिको दिगो हुन्छ?
विश्वको लगभग आधा कपडा पॉलिएस्टरले बनेको छ र ग्रीनपीसले २० this० सम्ममा यो रकम झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरेको छ। किन? एथलिजर प्रवृत्ति यदि यसको पछाडि मुख्य कारणहरू मध्ये एक छ: उपभोक्ताहरूको बढ्दो संख्या स्ट्रेचियर, थप प्रतिरोधी कपडाहरूको लागि हेर्दछ। समस्या यो छ, पॉलिएस्टर छ ...
पानी सक्रिय शाई के हो?
पानी सक्रिय शाई के हो? पानी वा पसिनाबाट ओसको सम्पर्कमा नआउन्जेल शाई पूर्ण रूपमा अदृश्य हुन्छ। कहिलेकाँही, पानी सक्रिय गरिएको मसीले मुद्रित डिजाइनहरू मात्र देखिन्छ जब कपडा गीला हुन्छ। जब कपडा सुक्खा हुन्छ, तपाईंको डिजाइन हराउँछ, चक्र सुरु गर्न को लागी सबै तयार ...
हामीलाई स्काईप द्वारा सम्पर्क गर्नुहोस्